Helix Piercings - Talooyin Casri ah oo ku Saabsan Ragga Stylish | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waxaad ku aragtay daloolinta boqolaalka jeer ee dhalinyarada iyo dhalinyarada oo aadan ogeyn waxa ay caanka ku tahay daloolinta Helix. Waxay yihiin nooc ka mid ah daloolin ama dhego Waxaa la dhigayaa qaybta sare ee dhegta, gaar ahaan qaybta carjawda.
Haddii fikraddaadu tahay inaad mid sameysid, waa inaad taas ogaataa iyadu waa moodel aad u soo jiidasho badan Si aad ugubilaawdo dunida wax muda, waxaa loogu talagalay kuwa raadinaya qaab ka duwan oo soo jiidasho leh Si aad u ogaato qaababkeeda iyo qaababkeeda, qaabka loo sameeyo iyo waqtiga bogsiinta, hoos ka aqri faahfaahinta oo dhan.
1 Hilib Helix
2 Sidee loo dalooliyaa Helix?
3 Tilmaamaha bogsashada
4 Noocyada dhaadheer ee Helix
4.1 Heerka Heesaha Helix
4.2 Duugista Helix Gudaha
Magaciisa waxaa loo tarjumay Ingiriisi ee helix, ka dibna waa heliic ama daloolinta dhagta sare halka dhegta la gelin doono, xaaladdan oo ah buro, ama daloolin, taas oo ah qayb go'an oo aan lahayn qaab gibil. Waxaa lagu meeleyn karaa illaa seddex dherer: qaybta sare carjawda, qaybta dhexe ee dibedda iyo gudaha ah iyo qaybta hoose.
Sidee loo dalooliyaa Helix?
Waxaa jira habab dhowr ah oo lagu awoodo. Kuwaas waxaa ka mid ah suurtagalnimada ku samee gurigaaga iyo in taas aawadeed ay jiraan qaar casharrada shabakadda markaa waxaad ku sameyn kartaa talaabo talaabo irbad dhuuban.
Aragtidayda, hadaadan awood u lahayn inaad sameyso, wey fiicantahay - tag xarun daloolin gaar ah, halkaasoo ay si deg deg ah uga samayn doonaan godka, si sax ah oo leh damaanad qaad nadaafadeed.
Waxaa jirta wado kale oo sanado lagu jiray taas oo ah qori cadaadis leh waxaana badanaa lagu sameeyaa farmasiyada. Waxaad dareemi doontaa cadaadis yar markii aad sameyneyso iyo xanuun yar markaad sameyneyso, laakiin si wanaagsan ayaa loo qaadi karaa.
Waqtigeeda bogsigu aad buu u dheer yahay, midka hore waa 2 illaa 3 bilood nadaafad wanaagsan, laakiin waa lagu kordhin karaa 6 bilood ilaa sanad. Talada la tilmaami karo ayaa ah in la sameeyo nidaam nadaafadeed oo wanaagsan, isku day in aad maydho aagga 2 ilaa 3 jeer maalintii, gaar ahaan haddii timahaagu si toos ah ula xiriiraan.
Waad ku dhaqi kartaa aagga jirdhiska jir ahaaneed iyadoo la kaashanayo suuf ama adigoo si taxaddar leh ugu maydhaya aagga saabuun dhexdhexaad ah iyo biyo diirran. Waxaan tilmaamay inaan taxaddar yeesho maxaa yeelay hubaal aaggu waa mid aad u xanuun badan toddobaadyada ugu horreeya, xiriirkiisuna aad buu u xanuun badan yahay.
Sidaa darteed laguma talin karo inaad dhaqaajiso dhegaha inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya si looga fogaado waxyeelo unugyada gudaha ah oo sababa caabuq. Ha xidhnayn koofiyado ama wax kasta oo cadaadinaya iyada oo wixii ka sarreeyana isku day hal dhinac ha seexan meeye dhegtu, maadaama cadaadisku aanu fiicnayn.
Noocyada dhaadheer ee Helix
Dhageysiga ugu habboon waa midka dhexroorkiisu yahay 1,2 mm dhexroor iyo baarkiisa dhererkiisu yahay 6 mm iyo wixii ka dambeeya. Siddooyinku waxay u dhexeeyaan 8 ilaa 9 mm dhexroor.
Waxa kale oo jira suurtogalnimada iibso hilqad been abuur ah ku dhejinaya dhegta hal clip ama cadaadis. Waa hab lagu hubiyo aagga ay kugu habboon tahay iyo haddii waqti ka dib aad jeceshahay inay kugu filnaato inaad mid ka dhigto mid wanaagsan.
Hilqado ama daloolin oo bixisa natiijada ugu fiican ee nadaafadeed ayaa had iyo jeer noqon doonta kuwii lagu sameeyey Dahab, maaddaama ay yihiin 100% hypoallergenic, in kasta oo kuwa ay ku jiraan birta qalliinka ay sii kordhayaan, maaddaama ay tahay walax waarta, oo aan lahayn xasaasiyad xasaasiyadeed iyo qiimo jaban.
Heerka Heesaha Helix
Waxay ku taalaa banaanka carjawda dhagta waana tan ugu badan, way fududahay in meel la dhigo oo la beddelo. Helitaanka daloolku maahan hawl aad u xanuun badan oo had iyo jeer waxay ku jirtaa gacanta dhagaystayaasha dhallinta yar ama kuwa u baahan inay xoogaa xarrago ah ku beddelaan muuqaalkooda.
Duugista Helix Gudaha
Daloolin Tani waa mid ka mid ah noocyada Helix in waxay ku taal qaybta gudaha ee kilyaha, waxaad arki doonto way adagtahay in laqabto waana lagama maarmaan in lagu qodo gacmo khibrad leh maadaama shaqadeedu aysan sahlaneyn.
Waxaa la muujiyey in daloolinta daloolkan Waxay ka saareysaa ilaa 97% madax xanuunka, inkasta oo aysan ahayn dammaanad la hubo. Beeridda daloolkan aaggan waa mid caan ah, laakiin waxaa jira dad sameeyey oo aan dareemin horumar.
Waa mid kale oo ka mid ah siyaabaha taas Waxay ku yaalliin gudaha gudaha dhegta, ku dhagan wajiga, aagga qalooca ee ku dheggan qeybta sare ee dhegta. Waxay sidoo kale isu bedeshaa aag ay adag tahay marinka daloolinta oo haddii aad rabto inaad ogaato inay xanuun leedahay waa inaan kuu sheegno maya, maadaama aysan ku jirin xididdada neerfaha badan.
Talo ahaan intaadan sameynin muditaanka Helix waa inaad sameysaa qiimeyn sidaan horeyba u soo sharaxnay. Waxaad awoodi kartaa marka hore matalan nooca jiirada dhowr maalmood leh dhego been abuur ah. Hadana haddii aad go'aansato inaad sameyso, mar alla markii aad sameyso waa inaad raacdaa taxaddar taxaddar leh oo daryeel nadaafadeed iyo daryeel maalin kasta, sidaa darteed waxay qaadan doontaa sida ugu yar ee suurtogalka ah ee lagu bogsado. Haddii si kadis ah kuugu dhaco infekshan daran waa inaad u tagtaa dhakhtarka si laguu qoro kareem antibiyootiko ah. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato noocyada hilqado hilqado ee ragga aad isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhaawacyada Helix